Video: Al-Shabaab Oo Baahisay Fariinta Mid Ka Mid Ah Maxaabiistii Lagu Qabtay Dagaalkii Ceelcadde - Hablaha Media Network
Video: Al-Shabaab Oo Baahisay Fariinta Mid Ka Mid Ah Maxaabiistii Lagu Qabtay Dagaalkii Ceelcadde
HMN:- Mu’asasada Al-Kataa’ib, garabka warbaahineed ee Xarakada Al-Shabaab ayaa baahisay Muuqaal video ah oo uu ka soo muuqanayo Maxbuus dagaal oo Kenyaati ah kaas oo ka mid ahaa maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii lagu xasuuqay ciidamada Kenya ee sanadkii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka Ceel-cadde ee Gedo.
“Lagasoo bilaabo markii uu dhacay dagaalkii Ceelcadde ilaa hadda waxaan ku jirnaa Jeelka Al-Shabaab anagoo maxaabiis ah, welina wax war ahna kama helin dowladeena. Ma aanan heli wax caawin ah haba yaraatee sidaas darteed waxaan shacabka Kenya ka codsaneynaa in ay u midoobaan arinteena, una raadiyaan xal lagu soo afjarayo Mushkiladda na heysata” ayuu yiri.
“Waxaad ahayd hogaamiyaha Kenya laga soo bilaabo markii nala keenay Soomaaliya ilaa hadda. Waxaan kaa codsaneynaa in aad na caawiso oo aad raadiso wadda aad nooga bixin karto xaaladda maxbuusnimo ee aan ku jirno. Qoysaskeena aad ayey nooga fog yihiin, mana ka warheyno” ayuu yiri.